Inona no azon'ny Amoxicilina atao aminao? - BALLYA
Posted on Febroary 26, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny amoxicilina?
Amoxicilina dia iray amin'ireo semi-sentetika be mpampiasa indrindra penisilinina -karazany malalaka beta lactam antibiotika. Izy io dia vovoka fotsy miaraka amin'ny antsasaky ny fiainana tokony ho 61.3 minitra. Milamina izy io ao anatin'ny toetran'ny asidra, ary mahatratra 90% ny tahan'ny tsindrona amin'ny gastrointestinal. Amoxicilina dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria ary manana fahaizany mamaky ny fonon'ny sela.
Amoxicilina dia iray amin'ireo semi-synthetic am-bava be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao penisilinina. Ny fanomanana azy dia misy kapsily, takelaka, granula, takelaka azo zahana sns, ary matetika ampiarahina aminy asidra clavulanic manamboatra takelaka azo zahana. Amoxicilina sy clavulanate potasioma dia mety ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana ambany, ny otitis media ary ny sinusitis vokatry ny lactamase beta mamokatra Haemophilus influenzae sy Moraxella catarrhalis.
Ny vokatra dia vovoka kristaly fotsy na saika fotsy; mangidy kely ny tsiro. Ny Amoxicilina dia mety levona kely amin'ny rano ary saika tsy vonoina amin'ny etanol.
Amoxicilina dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria sy ny fahaizany miditra amin'ny rindrin'ny sela. Izy io dia iray amin'ny vava be mpampiasa indrindra penisilinina, ary ny fanomanana azy dia misy kapsily, tablette, granules, tablette azo miparitaka sns. Ny marary voan'ny alikaola penicillin sy ny penicillin dia tsy tokony hadinina amin'ity fanafody ity.
Amoxicilina dia spectrum broad-semi synthetic penisilinina. Ny fihanaky ny bakteria sy ny fiasan'ny bakteria dia mitovy amin'ny ampicillin, fa ny fanoherana ny asidra dia matanjaka kokoa noho ny ampicillin, ary ny vokatry ny bakteria dia mahery sy haingana kokoa noho ny farany, nefa tsy azo ampiasaina amin'ny fitsaboana meningite. Ny antsasaky ny fiainana dia 61.3 minitra eo ho eo. Amoxicilina dia miorina amin'ny toe-piainana asidra, miaraka amin'ny 90% ny tahan'ny tsiranoka amin'ny gastrointestinal. Voadoka haingana sy feno kokoa noho ny ampicillin izy io. Misy vokany mitovy amin'izany afa-tsy ny Shigella izay tsy dia misy vokany firy noho ny ampicillin.
Amoxicilina dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria sy ny fahaizany miditra amin'ny rindrin'ny sela. Aorian'ny fitantanana am-bava, ny vondrona lactam ao amin'ny molekiola zava-mahadomelina dia hydrolyzy avy hatrany mba hamorona fatorana peptide, izay atambatra haingana miaraka amin'ny transeptidase ao amin'ny bakteria hampiatoana azy, manapaka ny fomba tokana iankinan'ny bakteria amin'ny transeptidase hamolavolana glycopeptides ho amboary ny rindrin'ny sela, mahatonga ny sela bakteria ho lasa vatana boribory haingana ary vaky sy ho levona, ary mivonto sy maty ny bakteria noho ny fahaverezan'ny rindrin'ny sela sy ny fidiran'ny rano mitohy.
Izy io dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria sy bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria G + pathogenika sy bakteria G (ao anatin'izany ny cocci sy bacilli). Anisan'izany, ny amoxicilina dia manana hetsika bakteria tsara mankany amin'ny Streptococcus pneumoniae, Streptococcus hemolyticus, coco-positive gram aerobic toa an'i Staphylococcus faecalis ary Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae ary bakteria gram-negatif aerobic hafa izay tsy mamokatra beta lactamase sy Helicobacter pylori. Hemodialysis dia afaka manala fanafody sasany, fa ny dialisis peritoneal dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanesorana ity vokatra ity.
Amoxicilina dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana tazo typhoid, hafa Salmonella areti-mifindra sy mpitatitra typhoid. Nahazo vokatra tsara ihany koa ny fitsaboana areti-mifindra vokatry ny bakteria mora tohina izay tsy mamokatra lactamase beta. Ho an'ireo marary voan'ny aretin-tratra urinary ambany sy urethritis gliorrhoeae Neisseria gonorrhoeae ary cervicitis, ny fatra am-bava tokana 3 g dia ampy hahazoana valiny mahafa-po.
Ny aretin-tsofina, ny orona, ny tenda, ny aretin'ny taovam-pisefoana ary ny hoditra sy ny tavy malemilemy vokatry ny Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus izay tsy mamokatra penicillinase, Streptococcus hemolyticus ary Haemophilus influenzae izay tsy mamokatra β-lactamase dia famantarana avokoa. Ny Leptospirosis dia afaka mampiasa amoxicillin koa. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny aretina urogenital naterak'i Escherichia coli saro-pady, Proteus mirabilis ary Enterococcus faecalis. Ity vokatra ity, atambatra amin'ny clarithromycin ary lansoprazole, misy fiatraikany tsara amin'ny fitsaboana Helicobacter pylori infection.
2. Fatra Amoxicillin
Ny olon-dehibe sy ny ankizy milanja mihoatra ny 40 kg dia maka kapsily 1 ka hatramin'ny 2 (0.25 ~ 0.5 g) isaky ny 6 isaky ny 8 ora ary indray mandeha ary ny doka isan'andro dia tsy mihoatra ny 4 g (16 kapsily); ny ankizy milanja latsaky ny 40 kg dia tokony milanja 20 ~ 40mg / kg / isan'andro, alaina in-2 ka hatramin'ny in-3; 30mg / kg / andro ho an'ny zazakely latsaky ny telo volana, alaina amin'ny fatra mizara, indray mandeha isaky ny 12 ora; ny marary manana fahasembanana mafy amin'ny voa dia mila manitsy ny fatra. Ny olona manana tahan'ny fahazoana kôlininina maharitra 10 ~ 30ml / kg dia mitaky 0.25-0.5g isaky ny 12 ora. Ity vokatra ity dia azo raisina amin'ny vavony foana na aorian'ny sakafo, ary azo alaina amin'ny ronono sy sakafo hafa. Ireo marary manana urethritis gonococcal Neisserial dia afaka mandray 3G am-bava indray mandeha.
Ny fanandramana fananahana biby dia nampiseho fa ny amoxicillin amin'ny 10 heny ny fatr'olombelona dia tsy manimba ny fahavokarana sy ny foetus voalavo sy totozy. Na izany aza, mbola misy ny tsy fahampian'ny fandinihana voafehy tsara amin'ny olombelona. Satria tsy afaka maminavina tanteraka ny valin'ny olombelona ny fitsapana ny fiterahana, dia tokony hampiasa an'io vokatra io ny vehivavy bevohoka rehefa tena ilaina izany. Koa satria amxicillin kely dia azo afenina amin'ny rononon-dreny, ary mety hiteraka tsy fahazakana ny zaza izany.
Vokatry ny amoxicillin-effects
Amoxicilina dia tsy fanafody fanoherana ny inflammatoire, fa antibiotika penicillin semi-synthetic matetika ampiasaina amin'ny klinika. Izy io dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria ary ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Izy io dia mifanaraka amin'ny omeprazole, ranitidine ary erythromycine. Ny fampiasana fanafody toy ny Helicobacter pylori, valanaretina vavony, fery amin'ny gastric, endocarditis, bronchitis mitaiza ary aretina hafa dia manana lanjany avo lenta sy vokatra mahasitrana tsara ary afaka manatsara be ny soritr'aretina marary ary manamaivana ny fanaintainany.
Na izany aza, amin'ny maha antibiotika azy, aorian'ny fampiasana azy, dia hiteraka fikorontanan-tsaina, fanina, fahitana manjavozavo, tsy fahampian-dra ary fihenan-dratsy hafa, izay hisy fiatraikany amin'ny vokatry ny fitsaboana. Noho izany, tsy maintsy manatona dokotera ianao rehefa mila mihinana fanafody, aza manome fanafody mihitsy, ary aza hadino ny manaraka ny torohevitry ny dokotera rehefa mampiasa azy.
Fambara ny fanehoan-kevitra mahazaka: ny tazo, ny urticaria, ny aretin-koditra ary ny sohika dia mety hitranga, indrindra amin'ireo marary voan'ny mononucleosis mifindra, ary tsy fahita firy ny hatairana manafin-tety.
Ny soritr'aretin'ny rafitra fandevonan-kanina: matetika ny fivalanana, ny fisaleboleboana, ny fandoavana ary ny fambara hafa, ary indraindray dia misy ny fanehoan-kevitra momba ny gastrointestinal toy ny colite pseudomembranous.
Soritr'aretin'ny rà: eosinofilia, leukopenia, thrombositopenia, tsy fahampian-dra, tsy fahita firy.
Ny fanehoan-kevitry ny hoditra sy ny mucosal: maimaika makulopapular indraindray, multimérieur erythema exudative, siansa Lyell, dermatitis exfoliative.
Taorian'ny nidiran'ny amoxicillin tao amin'ny vatan'olombelona, ​​dia manodidina ny 30% ny zava-mahadomelina no napetraky ny atiny, ary manodidina ny 70% ny zava-mahadomelina no napetaka tamin'ny voa, ary avy eo dia navoakan'ny urine. Amoxicilina dia afaka miditra amin'ny sela voajanahary mba hitana ny anjara asany, ka mety hanimba ny sela voa ao amin'ny marary izany, ka hanimba ny fiasan'ny voa.
Miaraka amin'ny taona, mihena tsikelikely ny fiasan'ny voa ataon'ny olona antitra sy antitra. Raha toa ny marary toy izany mampiasa amoxicillin be loatra amin'ny fitsaboana, dia mety hampitombo ny enta-mavesatry ny voany, hampihena ny fivoahan'ny fanafody amin'ny vatana, ary hamorona kristaly mivaingana ao amin'ny urinany, izay afaka manakana ny lalan-drany ary mahatonga ny lalan-drà sy hemorrhages, mitarika amin'ny soritr'aretina toy ny ra ao amin'ny urine sy ny colic renal. Aza hadino ny mijery ny fatra rehefa mihinana fanafody ho an'ny antonony sy ny zokiolona.
Hitan'ny fandinihana fa ny marary tsy manana tantaran'ny aretina ara-tsaina dia mora tohina amin'ny rafi-pitabatabana afovoany toy ny fahitana manjavozavo, tebiteby, tsy fahitan-tory, fanina, famoizam-po ary koa fientanam-po tsy hay hazavaina mandritra ny fitsaboana maharitra miaraka amin'ny amoxicillin. Ny fisehoan'ireo fanehoan-kevitra ratsy ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny asa mahazatra sy ny fiainan'ny marary. Rehefa misy ny fiatraikany ratsy voalaza etsy ambony ao amin'ireo marary voatsabo amin'ny amoxicillin dia tokony hatsahatra eo no ho eo na eo ho eo ny fanafody.
Ny marary sasany dia mety manana soritr'aretin'ny hemôtika hemôlisika autoimmune aorian'ny fitsaboana, ary ny fisehoan'ny klinika dia reraka. Ny fanafody toy ny prednisone sy vitamina B12 dia azo omena hanamaivanana ny soritr'aretina. Ny marary sasany dia mety manana soritr'aretin'ny eran'ny molotra aorian'ny fanafody, miseho toy ny fivontosan'ny molotra sy ny mangidihidy. Raha mitranga io famantarana io dia tokony hatsahatra eo no ho eo ny fanafody, ary tokony hosasana masira ara-dalàna ny molotry ny marary. Erythromycine menaka azo omena ny molotra, izay mahomby hanamaivanana ny soritr'aretina. Ny marary sasany dia mety hahatsapa fanaintainana amin'ny kibo, fivalanana ary koa colitis pseudomembranous ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fihinanana amoxicillin. Raha manana fiatraikany ratsy amin'ny rafi-pandevonan-kanina ny marary mandritra na aorian'ny fitsaboana dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody.
Ny departemantam-pirenena misahana ny fahasalamana dia mamaritra izany a penisilinina Ny fitsapana ny hoditra dia tsy maintsy atao alohan'ny fampiasana amoxicillin, ary ireo izay manana fihetsika tsara dia tsy mahazo mampiasa azy io. Ho fanampin'izany, ny sodium penicillin ary potassium penicillin dia antibiotika penicillin ihany koa, ary ny fitsapana ny hoditra dia tsy maintsy atao alohan'ny fampiasana. Raha tsy maninona ny manao fitsapana amin'ny hoditra dia azonao atao ny mandray ampahatelon'ny kapsula aloha. Raha tsy misy fiatraikany ratsy dia azonao raisina ara-dalàna. Raha mahatsiaro tsy salama ianao dia mankanesa any amin'ny hopitaly haingana araka izay tratra.
Ny olona tsy mahazaka karazana penicillin iray dia mety tsy mahazaka penicillins hafa, na mety tsy mahazaka penicillamine na cephalosporine. Ny fitsapana ny hoditra penicillin dia tsy maintsy atao alohan'ny fanafody.
Voarara ho an'ireo marary voan'ny mononucleosis mifindra, leukemia lymphocytic, aretina cytomegalovirus ary lymphoma.
Ny olona manana tantaran'ny asma, eczema, fever fever, urticaria ary aretina hafa mahazaka otrikaretina herpes, indrindra ireo marary manana mononukleosis (izay mety hampitombo ny mety ho fiasan'ny hoditra) dia tokony hitandrina tsara.
Ny fampiasana reagents (R) takelaka misy solifara (R) sy ny vahaolana Fehling handrefesana ny siramamy dia mety hiteraka fiheverana diso diso; marary vitsivitsy dia mety hiaina transaminase serum avo, eosinophilia, ary leukopenia aorian'ny fitsaboana.
Ny vehivavy bevohoka sy mampinono ary zaza latsaky ny 3 volana dia tokony hampiasa izany am-pitandremana. Aorian'ny fampiharana ny vehivavy bevohoka amin'ny trimester fahatelo dia azo ahena ny fatran'ny estrogen ao amin'ny plasma fa tsy misy fiatraikany amin'ny estrogen sy progesterone maimaimpoana izany. Ity vokatra ity dia azo esorina amin'ny alàlan'ny ronono, ary ny zazakely dia afaka manentana azy.
Amoxicillin dia manana endrika fatra isan-karazany, ao anatin'izany ny tsindrona, kapsily, takelaka, granula, sns. Na izany aza, na manao ahoana na manao ahoana ny fatra fatra, manana takiana avo lenta amin'ny tontolon'ny fitehirizana izany. Tokony alokaloka, hasiana tombo-kase ary hotehirizina amin'ny toerana mangatsiaka sy maizina ary maina. Na dia mety aza ny fepetra fitahirizana dia mety mbola hisy ihany ny fanovana simika toy ny lo sy ny polymerisation ny amoxicillin mandritra ny fitehirizana ka mamorona akora mahazaka vaovao. Amin'ny vanim-potoana mafana sy mando, hitombo ny tahan'ny fahasimbana sy ny tsy fahombiazana.
Ho fanampin'izay, amoxicillin sy aminoglycoside fanafody (toy ny gentamicin, kanamycin), ciprofloxacin, ny pefloxacin sy ny fanafody hafa dia miady ary tsy azo apetraka ao anaty kaontenera iray ihany. Ny fampiasana kapsily amoxicillin dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny torohevitry ny dokotera. Jamba sy mampidi-doza ny fihinanana azy ho fanafody ho an'ny ankohonana. Amin'ny dingan'ny fihinanana amoxicillin, raha misy ny mahazaka fanehoan-kevitra toy ny aretim-bovoka, na ny fihetsika manimba amin'ny rafitra fandevonan-kanina, toy ny fivalanana, ny fandoavana sns, dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody.
3. Fifandraisana rongony
Ny probenecid dia afaka manemotra ny fitrandrahana amina amisistika (fampihenana ny tsiranoka aminexicillin), manalava ny antsasaky ny serumany ary mampitombo ny fatran'ny ra an'ity vokatra ity.
Rehefa amoxicillin no ampiasaina miaraka aminoglycoside zava-mahadomelina, dia afaka manatsara ny vokarin'ny bakteria amin'ny vitro amin'ny amoxicillin amin'ny Streptococcus faecalis amin'ny fifantohana ambanin'ny tany.
Rehefa amoxicillin no ampiasaina miaraka lactamase beta mpanakana toy ny asidra clavulanic, ny vokatry ny bakteria dia mihamitombo. Ny asidra Clavulanic dia tsy vitan'ny fanatsarana ny fahatsapana ny ins-lactamase izay mamokatra tsiranoka amin'ny amoxicillin amin'ny ambaratonga samihafa, fa koa manatsara ny vokatry ny amoxicillin amin'ny karazana tsy mora tohina, anisan'izany ny Bacteroides, Legionella, ary Nocardia Bakteria ary pseudomallei.
Chloramphenicol, macrolides, Juanamines ary tetracycline Mety hanelingelina ny vokatry ny bakteria an'ity vokatra ity amin'ny vitro, saingy tsy fantatra ny dikany ara-pahasalamana.
Rehefa ampiasaina miaraka amina fanabeazana aizana ny amoxicillin dia mety hanelingelina ny fivezivezena mampidi-doza ao amin'ny fanabeazana aizana izany, ka hampihena ny vokany.
Allopurine inhibitors ny asidra urika dia mety hampitombo ny mety ho fiota amin'ny hoditra amin'ny amoxicillin.
Rehefa ampiarahina amin'ny methotrexate ny amoxicillin, ity vokatra ity dia afaka mampihena ny tahan'ny methotrexate mahazo ny voa, ka mampitombo ny poizin'ny methotrexate.
Ny sakafo dia afaka manemotra ny fandraofana ny amoxicillin, fa ny sakafo kosa tsy mampihena be ny fitambaran'ny zava-mahadomelina.
Amoxicilina dia antibiotika penicillin semi-synthetic ary be mpampiasa. Fa satria ny amoxicillin dia karazana penicillin ihany koa, ny fiatraikany ratsy sy ny fitandremana ny penicillin dia azo ampiharina amin'ny amoxicillin ihany koa.
BALLYA manome a fitsapana betalactam (amoxicillin dia an'ny antibiotika beta lactam) mba hilazana aminao raha misy residu beta lactams amin'ny vokatra vita amin'ny ronono izayhaninao isan'andro.